Wararka Maanta: Jimco, Oct 11, 2019-Ciidamada dowladda iyo Al-shabaab oo ku dagaaalamay dulleedka degmada Jowhar
Jimco, October, 11, 2019 (HOL)-Wararka ka imanaya magaalada Jowhar ee xarunta dowlad gobolleedka Hirshabeelle ayaa sheegaya in iskahorimaad hubeysan ciidamada dowlada federalka iyo dagaalamayaal Al-Shabaab ah uu ku dhaxmaray deegaan dulleedka Koonfur Barri uga beegan magaalada.
Deegaanka lagu dagaalamay oo lagu magacaabo Deyma-Same ayeey wararku sheegayaanin iskahorimaad oo socday muddo saacad ah uu sababay qasaare dhimasho iyo dhaawac ah balse illaa iyo hadda ma jiro wax war rasmi ah oo ka soo baxay labada dhinac.
Dagaalka ayaa yimid kaddib markii xoogag ka tirsan Alshabaab ay diideen in la xiro wabiga Shabelle oo ka fatahay deegaanka Deymo-Same.
Wararka qaar ayaa sheegaya in si ulakac ah ay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay u fatahiyeen wabiga Shabelle gaar ahaan buqda Deyma-Same.
Dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa fariisimo ku leh deegaano ku yaal hareeraha wabiga Shabelle gaar ahaan inta u dhexeysa degmooyinka Jowhar iyo Balcad ee gobolka Sh dhexe.